Barakacayaal cusub oo ku dhibaataysan xuduuda Kenya iyo Soomaaliya
Gedo 02 May, 2012Barakacayaal hor leh oo ka yimid qeybo ka mid ah dhulka Soomaaliya oo dhawaan soo gaaray deegaanka la yiraahdo Tuulo Amiin oo dacalka ku haya xuduudda ay Soomaaliya la wadaagto waddamada Kenya iyo Ethiopia, ayaa waxaa soo foodsaaray xaalado adag oo dhanka nolosha la xiriirta, barakacayaashan cusub ayaa lagu soo warramayaa inay ku biireen kuwo halkaasi horey ugu sugnaa.
Barakacayaashaan oo la sheegay inay badigood ka yimaadeen deegaanno ku yaalla gobollada Jubbooyinka, Bay, Bakool iyo qeybo ka mid ah gobolka Gedo ayaa waxaa heysta dhibaatooyin ay ka mid yihiin cunna la`aan, hoy la`aan, biya la`aan iyo daryeel caafimaad oo aysan helin.
Carruurta iyo dadka da`da ah ayaa waxaa haysta dhibaatada ugu daran, taasoo ay ka mid tahay nafaqa darri xooggan. “Ma heysanno Weelal aan ku cunno hunguriga iyo hoy aan ka gabbaadsanno dhaxanta , roobabka iyo kulaylka, raggeenii shaqa ma haystaan.” sidaa waxaa Raadiyo Ergo u sheegtay hooyo ka mid ah qoysaskaasi cusub ee ka soo barakacay dagaallada ka jira Soomaaliya taasoo haysata carruur badan, hooyadan ayaa intaasi ku dartay inay u baahan yihiin in lala soo gaaro gurmad deg deg ah. Qaar ka mid ah kuwa ugu taagta daran dadkaan ka soo cararay meelo ka mid ah gobollada koonfureed ee Soomaaliya waa haween da` ah, kuwaasoo hadda billaabay inay ka dawarsadaan dariiqyada iyo mehradaha ganacsiga.
Haweeney Ergo la hadashay xilli ay isku toleysay jawaanno, baco iyo baakado ay doonaysay inay ka samayso gabbaad ay ka galaan iyada iyo qoyskeeda qorraxda kuleeylka badan ee ka jirta degaanka iyo roobabka billowga ah, ayaa sheegtay inay noloshu ku sii daba yar tahay, xaaladdooduna ay mareyso meel halis ah “Qoyskeyga wuxuu ka kooban yahay illaa 10 ruux, wax aan heysanno lama arko, marka waxaan u baahannahay kaalmo weyn oo leh cunno, hoy , daawo iyo biyo intaba si aan u sii noolaanno” ayay tiri haweeneydaasi.
Dadka deegaanka, gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Beled Xaawo oo qaarkood soo arkay dhibaatada haysata qoysaskaasi oo Ergo la hadlay ayaa sheegay in bulshada caalamka looga baahan yahay in dadkaasi ay wax u qabato. “Dadka muslimiinta ah, Soomalida iyo dhammaanba beesha caalamka ee wax gar-gaara waxaan ka codsaneynaa iney kaalmo deg deg ah lasoo gaaraan dhibbanayaashaan aan xitaa helin deeqaha laga dhiibo meelaha u dhaw dhaw iyaga.” ayuu yiri Rashiid Cabdi oo ka mid ah mas`uuliyiin soo booqatay goobta ay ku nool yihiin dadkaasi.
Ma ahan Tuulo Amiin oo kaliya meesha ay dhibaatadu ka jirto, ee waxaa sidoo kale jira meelo kale oo aad u fara badan oo ay weli ku xareysan yihiin barakacayaal aad u tiro badan kuwaasoo ka soo cararay abaaraha iyo colaadaha ka jira Soomaaliya, gaar ahaan gobollada ku yaalla koofurta.
Deegaankaan dhibaatada nolosha ku hayso qoysaskaasi, ayaa qiyaastii illaa 5km ka xiga dhanka waqooyi magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo.
Nuur Cali Faarax/AA/FM/MG